RW Rooble oo wada qorsho mudo kordhin ah | SMC
Home WARARKA MAANTA RW Rooble oo wada qorsho mudo kordhin ah
Ila wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa SMC u sheegay in Magacabista Golaha Wasiirada & Ansixintooda ay qaadan doonto ku dhawaad 40 maalin taaso kadhigan in Xukuumada cusub ay ubaahantahay mudo ay ku diyaar garoowdo si ay u qabato doorasho .
arrintaan ayaa ah qorsho uu Madaxweyne Farmaajo dajiyay asagoo iska dheereynayo hadii mudo kordhin lasameeynayo aysan noqon mid asaga ka timaaday isla markaasna uu iska dhigaayo qof rabaa in doorasho waqtigeda lagu qabto.
waxaa iswaydiin leh MW Farmaajo & DG waxeey ku hishiiyeen jadwal doorasho , RW Rooble waqtiga uu heesto aad ayeey u yartahay hadaba maxeey tahay sirta ku jirta inlasoo daahiyo magacabista Golaha Wasiirada?
Hadii RW Rooble uu ka baran dagaayo Magacaabista shaqsiyaadka uu uxulanayo Golihiisa Wasiirada ma wuxuu heesta waqti uu howlo badan ku qabto ama maba jirto doorasho laqabanaayo oo markii waqtiga dowlada gabaabsi yahay ayuu RW ROoble codsi u dirsanayaa Golaha Shacabka si ay usiiyan mudo kordhin ?
Hadii ay dhacdo in RW Rooble uu codsado mudo kordhin maku eed la’aana Madaxweyne Farmaajo ?
Jawaabta oo fudud waa maya waayo howlaha hortabinta leh ee DFS waxaa lagu hagaa siyaasada MW Farmaajo , tilaab walbo uu qaadayo Raisal Wasaarihiisa waa mid ay isla ogayeen oo horey ugu so balameen.
MW Farmaajo ayaa noqday Hoggaanka ugu marin habaabinta badan , horay soomaaliya uma soo marin shaqsi ku sifooway been , balan ka bax, & Qiyaano .
Xitaa Mohamed Siyaad Bare taariikhdiisa markii dib loofiiyo wuxuu qaadan jiray goaan geesinimo hadii ay rabaan ha qaldanadaan . Lkn Maanta waxaa soomaaliya heesto Madaxweyne bilaaw & dhamaad ka sameesan been & qiyaamo.
waxaan sugnaa waa Golaha wasiirada ladaahinayo magacabistooda ? & Codsiga RW Rooble uu ujeedin doono Golaha shacabka mardhaw ?
Maxaa yaab isdaba yaala
Previous articleDhageyso Dab Khasaaro geystay ka kacay Goobo Ganacsi oo ku yaalla Walanweyn
Next articleDaawo Waa Maxay Xiriirka 3 Geesoodka ah ee Ka Dhexeeya Dowlada, NISA iyo Qadar